LiFlex, tambo yeApple Watch iyo inokupa kuzvitonga kuzhinji | Ndinobva mac
Inotevera Mobile World Congress ichaitirwa muBarcelona (Spain) pakupera kwemwedzi uno waKukadzi ichave nezvakawanda zvakavanzika. Tichaona zvakawanda zvitsva maererano nenhare mbozha. Nekudaro, zvakare iri mamiriro akasarudzika emakambani ari muchikamu che accessories. Uye kambani yakadanwa LiBEST ichave iripo netambo yayo yeApple Watch LiFlex.
Chimwe chezvinhu zvinotinetsa isu vashandisi vanowanzo pedza mazuva mazhinji vasiri pamba hazvimboperi bhatiri mumidziyo yedu. Ichokwadi kuti kana tiri muhofisi kana mune yekudyira, tinogona kugara tichienda kune plug. Asi zvakanakira kutora nesu zvishoma midziyo zvinogoneka. Uye iyo LiFlex bhandi ndizvo zvazvinoreva kuti: ipa kuzvitonga kuzhinji kuApple Watch zuva rese.
Sezvineiwo, LiBEST yaisada kupa zvakawanda nezvezvayo zvekushandisa. Asi zvakare ivo vanotaura mukati PhoneArena, Iyi Apple Tambo tambo inokupa iwe nezve rinowedzera zuva rehupenyu hwebhatiri. Uye zvakare, sekureva kwemugadziri wacho, achifunga kuti mushandisi anobhadharisa LiFlex mazuva ese maviri, inofanirwa kuve nehupenyu hunobatsira kweanenge makore maviri.
Isu hatina ruzivo rwehuwandu hwakawanda sei bhatiri remukati richava naro, chatakakwanisa kuziva magadzirirwo aro. Haisi tambo yakasarudzika - iwe ungatozvifungidzira -, kunyangwe chokwadi chiri chekuti haizotarisike sekushata. Ehe, ichave ine zvidimbu zvakati wandei. Chikamu chino gadzirisa wachi kuchikamu chikuru chichava nezvikamu zvese zviri zviviri zvakasanganiswa bhatiri. Saizvozvo, zvinokurudzirwa izvo pakutanga inongowanikwa chete kune Apple Tarisa 42 mm bhokisi; gare gare mamodheru anowirirana neshanduro diki dze38mm achaonekwa. Ehezve, isu hatizive ruzivo rwekuti iwo mutengo wacho uchave upi zvakare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » LiFlex, tambo yeApple Watch iyo inokupa kuzvitonga kuzhinji